यिनलाई दिल्लीले भाइकांग्रेस बनायो
काठमाडौं । नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छेले खुलेर भनेका छन्– प्रचण्ड र ओलीलाई दिल्लीले भाइकांग्रेस बनायो । निडर र आजसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारको दाग नलागेका नेता बिजुक्छे भन्छन्– म राजनीतिमै छु । सत्तामा पुगेका कम्युनिष्ट नेताहरु कम्युनिष्ट हुनसकेनन् । दिल्लीले बनाएका भाइकांग्रेस बन्नपुगे ।
नेकपाका नेताहरुले आफैले लेखेको घोषणापत्रअनुसार समेत काम गर्न सकेनन् । बिजुक्छे अगाडी भन्छन्– भूमिमा किसानको मोहीहक खोई ? युवालाई विदेश पठाइरहेका छन्, काम दिएको खोई ? युवाशक्ति बेचेर कम्युनिष्ट हुँ भन्ने ? बजारमा युवाको मोलतोल भइरहेको छ । कम्युनिष्टले गर्ने काम यही हो ?
यस्तो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार मान्दैनौं । चरीत्र नभएको पनि कम्युनिष्ट सरकार हुन्छ र ?
यो कम्युनिष्ट एकता हुँदै होइन । यो त भाइकांग्रेसको मिलन हो । म पहिलेदेखि नै यिनलाई भाइकांग्रेस भन्दै आएको छु,। यिनीहरु मिल्नु भारतको डिजाइन हो । माओवादी भारतमा जन्म्यो, एमालेले महाकाली सन्धिमा सही गरेकै हो, यी दुबैलाई भारतले मेल गराइदियो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने भारतीय डिजाइन हो ।